Ejiri matraasi na igbe igbe maka ire na ọnụahịa ahịa | Rayson
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Ejiri matraasi na igbe igbe maka ire RAYSON nwere otu ajụjụ maka ịza ajụjụ site na ịntanetị ma nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ọ bụla. Ma ị ga - achọ inweta ozi ndị ọzọ, kedu ihe anyị ga - eme, nwalee ngwaahịa ọhụrụ anyị - ọ ga - amasị m ịja gị n'anya, ọ ga - amasị m ịnụ olu gị.people agaghị Na-esi isi na-acha ọcha na-adịghị mma ma ọ bụ isi okwu a site na ngwaahịa a na nke izizi. Mgbe a sachara ọtụtụ oge, ọ na-adịwanye isi.